အင်္ဂါမောင်: Haveatrip! စကားကြောင့် လမ်းမဖြောင့်ခဲ့ကြခြင်း
မနက် ၈ နာရီခွဲမှာ တက္ကသိုလ်သွားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ။
အင်္ဂါမောင်တို့အဖွဲ့ တက္ကသိုလ်သွားဖို့ ကျောင်းက အထွက်မှာ ကျောင်းမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ (ဆန်းဒါးလင်းတက္ကသိုလ်မှာတက်မဲ့) ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက စကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်တယ်။
Haveatrip! တဲ့။
အင်္ဂါမောင်ကလဲ ငြိမ်မနေပါဘူး၊ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
"ဟာ ဘုန်းကြီးကလဲ Haveanice day! Haveanice trip တစ်ခုခုပြောရင်တော်သေး၊ Haveatrip လို့ တစ်ခါမှ မကြားဖူးပါဘူး"
သူကလဲ ခေါင်းမာသူပီပီ Have fun!! လို့တောင် ရှိသေးတာဘဲ။ Haveatrip လို့ပြောရင်လဲ ရလောက်ပါတယ်တဲ့။
သူပြောတဲ့စကားကို အငြင်းမပွါးချင်တာနဲ့ဘဲ အင်္ဂါမောင်တို့အုပ်စု ငြိမ်ငြိမ်ဆိမ်ဆိမ်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။
အချိန်က ကွက်တိတွက်ပြီးသားဆိုတော့ သူနဲ့ အငြင်းပွါးနေရင် အချိန်ကုန်သွားမှာ စိုးရိမ်ရတယ်လေ။
ကျောင်းက ၈ နာရီခွဲထွက်မယ်။ Hounslow west station ကို ခြေချင်လျောက်ရင် ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာမယ်။
Hounslow west ဘူတာကနေ Russell Square ဘူတာထိ မြေအောက်ရထားစီးရင် မိနစ် ၅၀ လောက်ကြာမယ်။ Russell Square ဘူတာကနေ လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ထိဆိုရင် ၁၀ မိနစ်လောက် ထပ်လျောက်ရမယ်။ ရထားစောင့်ရမဲ့အချိန်ပါ ထပ်ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ အသွားသက်သက် တစ်နာရီခွဲလောက် ကြာမယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ကျောင်းကနေ မနက် ၈ နာရီခွဲထွက်ရင် တက္ကသိုလ်ကို ၁၀ နာရီကွက်တိရောက်မယ်။ ၁၀ နာရီတိတိမှာ အတန်းစမယ်ဆိုတော့ အားလုံးကွက်တိပေါ့။ ဒီနေ့က ဒီတစ်ပတ်ရဲ့  နောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့ စာမေးပွဲရှိတယ်။ ဖြေဆိုချိန် ၂ နာရီ၊ စာလုံးရေ ၅၀၀ တဲ့။ ၁၀ နာရီက ၁၂ နာရီအထိဖြေရမှာ။
အင်္ဂါမောင်တို့အုပ်စု Hounslow ဘူတာကနေပြီး မြေအောက်ရထားကိုစီးပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ရထားက Russell Square မရောက်ခင် Knightsbridge ဘူတာမှာ သောင်တင်နေပါတော့တယ်။ ရှေ့ ဆက်မသွားတော့ဘူးတဲ့။ အရေးပေါ် Engineer works ရှိလို့ ဆိုဘဲ။ အဲဒါမှ ဒုက္ခ။ Ressell Square ဘူတာရောက်ဖို့က ခုနစ်ဘူတာလောက်လိုသေးတယ်။
နာရီကြည့်လိုက်တော့ ကိုးနာရီခွဲနေပြီ။ မတတ်နိုင်ဘူး။ တက္ကသိုလ်ကို အချိန်မီ မရောက်တော့မှာတော့ သေချာသွားပြီ။ အရေးကြီးတာက တက္ကသိုလ်ကို ဘယ်လို သွားရမယ်ဆိုတာကို အရင်စုံစမ်းဖို့ဘဲ။ အင်္ဂါမောင်တို့ မြေအောက်က ထွက်ပြီး ဘူတာမှာရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းကို မေးမြန်းရတယ်။ လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကို ဘယ်လို သွားရမလဲပေါ့။ နံပါတ် ၁၀ ကားကို စီးသွားပြီး Russell Square မှာ ဆင်းပါတဲ့။
ဒါနဲ့ဘဲ နံပါတ် ၁၀ ကားမှတ်တိုင်ကို လိုက်ရှာကြရတယ်။ မှတ်တိုင်ရှာရတာကလဲ အချိန်ကြာ၊ မှတ်တိုင်တွေ့ပြီး ဘတ်စ်ကား စောင့်ရတာကလဲ အချိန်ကြာဆိုတော့ အဲဒီနေရာမှာတင် ၁၀ နာရီထိုးသွားတယ်။ အမှတ် ၁၀ ဘတ်စ်ကားဝင်လာတဲ့အခါ တက်စီးလိုက်ကြတယ်။ ဘတ်စ်ကားကလဲ Traffic မိနေလို့ လိပ်သွားသလောက်ဘဲ မြန်တယ်။ အရေးကြီးတဲ့နေ့မှ အရာအားလုံးက နှေးကွေးနေတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ အဲဒီ ဘတ်စ်ကားကလဲ ဂိတ်ဆုံးထိ မပြေးတော့ဘူးတဲ့။ အရေးပေါ်အနေနဲ့ လမ်းတစ်ဝက်မှာဘဲ ရပ်ထားလိုက်တယ်။ Warren Street ဆိုတဲ့ မြေအောက်ဘူတာနားမှာ terminate ဖြစ်သွားတယ်။ ဘူတာဝန်ထမ်းတွေကို မေးမြန်းပြန်ရတယ်။ လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကို ဘယ်လိုသွားရမလဲပေါ့။ လမ်းလျောက်လို့သာ သွားပေတော့၊ ၁၅ မိနစ်လောက်လျောက်ရင် ရောက်ပြီတဲ့။ အင်္ဂါမောင်တို့လဲ ဟိုမေးဒီမေးနဲ့ လမ်းလျောက်လာပြီး တက္ကသိုလ်ကို ၁၁ နာရီတိတိမှာမှ ရောက်သွားတယ်။
အတန်းထဲရောက်တော့ ကျောင်းသားတွေ စာမေးပွဲဖြေတာ တစ်နာရီတိတိရှိနေပြီ။ အင်္ဂါမောင်လဲ ကမန်းကတန်းနဲ့ဘဲ စာမေးပွဲကို ရောဖြေလိုက်ရတယ်။ ၁၂ နာရီမှာ စာမေးပွဲက ပြီးသွားတယ်။ သူများတွေ ပြီးတော့ အင်္ဂါမောင်လဲ ပြီးလိုက်ရတာပေါ့။ နှစ်နာရီမေးခွန်းလွှာကို တစ်နာရီထဲနဲ့ ဖြီးဖြန်းနိုင်လိုက်တာကိုဘဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြံဖန်ချီးကျူးမိလိုက်တယ်။
အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ Haveatrip! ဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရဲ့ စကားက တကယ်ကို အင်္ဂါမောင်တို့အတွက် Trip အသေးစားလေး ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ မရောက်ဖူးတဲ့နေရာ၊ မစီးဘူးတဲ့ ဘတ်စ်ကားစီးပြီး မမြင်ဖူးတဲ့ ရှုခင်းတွေကို ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Nice ဆိုတဲ့ စကားမပါတဲ့အတွက် စာမေးပွဲဖြေချိန် တစ်နာရီတိတိနစ်နာခဲ့ရတာကတော့ အခြေအနေကို ဆိုးရွားစေပါတယ်။
တစ်ချို့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ တကယ်ကို အာစက်လျာစက်မိတတ်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ အလုပ်တစ်ခုအတွက်နဲ့ အချိန်တိုင်ပင်ကိုက်ပြီး သွားတဲ့သူတွေကို မလိုအပ်ဘဲ Haveatrip ဆိုတဲ့စကားကို လွယ်လွယ်ကူကူ မပြောမိကြစေဖို့ သင်ခန်းစာပေးလိုက်ရကြောင်းပါ။
Posted by Ashin Janaka at Friday, July 10, 2009